रोचक बन्दै टाइगर कप : पुरुषतर्फ गण्डकी वाहिरियो अन्य टिमको सम्भावना कायमै - Pokhara Sports
Home/पोखरा/रोचक बन्दै टाइगर कप : पुरुषतर्फ गण्डकी वाहिरियो अन्य टिमको सम्भावना कायमै
रोचक बन्दै टाइगर कप : पुरुषतर्फ गण्डकी वाहिरियो अन्य टिमको सम्भावना कायमै
पोखरा स्पोर्टस Send an email २९ पुष २०७८, बिहीबार १८:४९
पोखरा स्पोर्टस । पोखरा रंगशालामा जारी दोस्रो टाइगर कप आमन्त्रित खुल्ला क्लब महिला तथा पुरुष भलिवल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत पुरुषतर्फ साविक उपाधि विजेता गण्डकी प्रदेश प्रतियोगिताबाट बाहिरिए पनि अन्य टिमको फाइनल पुग्ने सम्भावना कायमै रहे पछि प्रतियोगिता रोचक बनेको छ ।
बिहिबार सम्पन्न पुरुषतर्फ विभागीय त्रिभुवन आर्मी क्लब र टिप टप हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लवले लगातार जित निकाल्दै फाइनल पुग्ने सम्भावना कायमै राखेका हुन् । पोखरा रंगशालास्थित भलिबल कोर्टमा भएको खेलमा आर्मीले साविक विजेता गण्डकी प्रदेशमाथि ३–१ को सेटमा जित निकाल्दै फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो बनाउँदा हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबले समेत विभागीय नेपाल एपिएफ क्लबलाई ३–१ को सेटमा पराजित गर्दै फाइनल यात्रालाई शुरक्षित बनाएको छ ।
साउथ एसिया सेन्ट्रल जोन भलिवलका अध्यक्ष लतिफ पोखरामा
यसै विच साउथ एसिया सेन्ट्रल जोन भलिवलका अध्यक्ष मोहमद लतिफ पोखरा आएका छन् । पोखरामा जारी टाइगर कपको बारेमा विशेष चर्चा भए पछि उनी प्रतियोगिता अवलोकनका लागि पोखरा आएका हुन् । उनलाई पोखरा रंगशालामा संस्थाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद शर्मा लगायतले भव्य स्वागत गरेका थिए । उनी संगै काठमाडौ बाट नेपाल भलिवल संघका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्द समेत पोखरा आएका छन् ।
सम्पन्न खेलमा आर्मीले पहिलो सेट २५–१५ ले जित्दा दोस्रो सेट भने २०–२५ ले गुमाएको थियो । तर तेस्रो सेट २५–१५ ले नै आफ्नो पक्षमा पार्दै खेलमा फर्किएको थियो । प्रतिष्पर्धात्मक बनेको चौथो सेटमा आर्मीले २६–२४ को जित निकाल्न सफल बन्यो । जितसँगै आर्मीको तीन खेलबाट ६ अंक पुगेको छ । आर्मीसँग पराजित भए पछि गण्डकी प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ । गण्डकीको ३ खेलबाट ३ अंक रहेको छ । उक्त खेलमा आर्मीका मान बहादुर श्रेष्ठ म्यान अफ दि म्याच र आर्मीकै इश्वर थापा उत्कृष्ट डिफेण्डर घोषित भएका छन् ।
त्यस्तै अर्काे खेलमा टिप टप हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबले विभागीय नेपाल एपिएफ क्लबलाई २३–२५, २५–२०, २५–१५ र २५–१९ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै फाइनलको यात्रालाई जिवित बनाएको छ । जितसँगै हेल्प नेपालको तीन खेलबाट ७ अंक पुगेको छ । प्रतियोगितामा एपिएफको लगातर चौथो पराजय हो । उक्त खेलमा टिप टपका विनित कुमार म्यान अफ दि म्याच हुँदै ५ हजार नगद हात पारे भने दिपक थापा उत्कृष्ट डिफेण्डर भएका छन् । शुक्रबार हुने खेलबाट नै फाइनल पुग्ने दुई टोलीको टुंगो लाग्ने प्राविधिक संयोजक तथा अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्रि तहल सिंह थापा मगरले जनाएका छन् ।
यता महिला तर्फको एक खेल भने लाइट प्रोटेष्टका कारण अवरुद्ध बनेको छ । न्यू डायमण्ड र विभागिय टोली विचको एक खेलमा न्यू डायमण्ड २–१ सेटले अगाडी रहेको अवस्थामा खेल अवरुद्ध बनेको प्राविधिक संयोजक मगरले बताए । यस्तै महिला तर्फको एक अर्को खेलमा भने आयोजक टाइगर ग्रुप विभागिय टोली नेपाल आर्मी संग ३–१ सेटले पराजय भएको छ । उक्त खेलमा टाइगर ग्रुपकी कभिषा ओमन अफ दि म्याच हुँदा आर्मीकी पुष्पा चौधरी वेष्ट डिफेण्डर भइन् ।
प्रतियोगिताको उपाधि विजेता महिला/पुरुष उपाधी विजेता टिमलाई समान नगद रु. ३/३ लाख, उपविजेता महिला/पुरुष टिमलाई समान नगद रु. १ लाख ५० हजार, तेश्रो हुने महिला/पुरुष टिमलाई समान नगद रु. ७५ हजार र सान्त्वना हुने महिला÷पुरुष टिमलाई नगद ३५ हजार प्रदान गर्ने आयोजकले जनाएको छ । यसै गरी महिला तथा पुरुष तर्फ उत्कष्ट एक–एक खेलाडीलाई समान नगद रु. २५/२५ हजार तथा हरेक विद्याका उत्कृष्ट खेलाडीहरुलाई नगद जनही नगद १०/१० हजार सहित र ट्रफीद्वारा सम्मान गरिनेछ ।